Kuratidza zvikwangwani kubva Kubvumbi, 2020
MuTrutnov-Babí, paStachelberg, padyo nenharembozha yemhizha, pane chivakwa cheElška chekutarira. Kubva papuratifomu yekuona iwe haungaone chete makomo eOrlické neJestřebí, Rýchory kana Úpa mupata, asiwo Nhare yekutanga yeRusununguko nhare.
Shongwe yekutarisira yakawana zita kubva kuna Mambokadzi Eliška, mudzimai waMambo Wenceslas II, iro guta raivawo neTrutnov iri padyo. Nekuda kwenzvimbo yeanotarisa chivakwa munzvimbo yenzvimbo yeStellberg artillery castle, inogona kukuyeuchidzai zvishoma zvekutarisa kwemauto. Eliška inomira pakakwirira panosvika 632 m, iri 24,5 m yakakwirira uye ine chivakwa chemapuranga chine simbi zvinhu, izvo zvinofuridza simbi inotenderera yemitsipa inotungamira kune maviri maonero. Yekutanga yakamirira iwe isingasviki mamita gumi, iyo yechipiri inowanikwa pakukwirira kwemamita makumi maviri nemashanu.Iye yekutarisa chikuva chakafukidzwa, saka unogona kunakidzwa nepanorama mune chero mamiriro ekunze.
Iyo yekutarisa shongwe inoyera makumi maviri nemashanu, makumi maviri emapuratifomu ekutarisawo ari pakukwirira kwe24,5 uye 9,4 metres pamusoro pevhu. Kubva pashongwe yekutarisa iwe unogona kuona iyo Libavské sedlo (Brana Lubawska) - yakakura
Kotel Krkonoše photos